Kooxaha Man United, PSG & Bayern Munich Oo Ogaaday Go'aanka Kama Danbaysta Ah Ee Raphael Varane. - Gool24.Net
Kooxaha PSG, Man United iyo Bayern Munich ayaa si wayn ugu dheg taagayay xaalada difaaca kooxda Real Madrid ee Raphael Varane, waxayna hadda ogaadeen go’aankiisa kama danbaysta ah.
Raphael Varane ayaa intii lagu jiray kulamadii caalamiga ahaa ee bishii March waxa uu shaki wayn galiyay mustaqbalkiisa Santiago Bernabeu laakiin hadda waxa soo bandhigay go’aanka uu qaatay.
Waraysi uu Raphael Varane bixiyay ayuu ku sheegay in uu xili ciyaareedka soo socda baaqi ku sii ahaan doono kooxdiisa Real Madrid taas oo u quus goysay kooxaha PSG, Bayern Munich iyo Man United.
Raphael Varane oo mustaqbalkiisa ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxaan doonayaa in aan xili ciyaareedka soo socda sii joogi (Real Madrid) maadaama oo aan hubo in aanu doonayno in aanu hanaan xoogan uga jawaabno”.
“Si adag ayaanu iskugu daynay oo aanu u dagalanay, laakiin waxba kuma eedayn karno maadaama oo aanu waqtigii adkaa luminay, anigu heerkaygii ugu fiicnaa kumaan jirin laakiin waxaynu doonaynaa in aynu markale aragno Varane-kii ugu fiicnaa” ayuu Varane hadalkiisa sii raaciyay.
“Waxaa waajib nagu ah in aanu si qunyar ah horumar u samayno, taasi Zidane wuu ogyahay. Waxaa waajib nagu ah in aanu dib u dhisno, oo aanu waxyaabaha badalno, maadaama oo aanu doonayno in aanu wareeg cusub bilaabano” ayuu Varane hadalkiisa ku soo xidhay.
Hadalka Raphael Varane ayaa farxad galinaya jamaahiirta kooxdiisa Real Madrid ee markii hore ka walwalsanaa in uu kooxda ka baxo kadib markii uu hore u muujiyay in aanu faraxsanayn.